अखबार – Page5– samyantra.com
हराएको हरायै भए त साढे ७ सय महिला !
काठमाडौं / एक वर्ष अवधिमा नेपालगन्ज नाका भएर भारत गएका मध्यपश्चिम क्षेत्रका साढे ७ सयभन्दा बढी नेपाली महिला सम्पर्कविहीन भएका छन् । भारत गएपछि हराएको भन्दै खोजीका लागि ८ सय ३४ उजुरी परेकामा ७ सय ६७ महिला अझै सम्पर्कमा नआएका हुन् । हराएकामध्ये ६७ जनाको भने उद्धार गरिएको छ । हराएकामा सबैभन्दा बढी बाँकेका छन् । मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील माइती नेपाल नेपालगन्जका अनुसार बाँकेमा २ सय ८ महिला हर...
बाम एकता गर्ने हो कि ल्याङ ल्याङ मात्रै ?
काठमाडौं : पार्टी एकताका लागि संयोजन समिति बनाए पनि एमाले-माओवादी केन्द्रले आफ्ना शीर्षस्थ नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नेगरी नयाँ सांगठनिक प्रारूप अझै तयार गर्न सकेका छैनन् । दुवै अध्यक्ष तहमा पार्टी एकतापछि नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा सघन छलफल चलिरहेको थाहा भएको छ । एकतापछिको आफ्नो भूमिकाका विषयमा नेताका आ-आफ्नै इच्छा अभिव्यक्त हुन थालेका छन् । आसन्न वाम सरकारको प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष के...
हैन, जग्गा कारोबारीहरुका लागि रैछ कि क्याहो प्रदेश राजधानीको लफडा ?
प्रदेश राजधानीको चर्चासँगै जग्गाको मूल्य अत्याधिक पाइएको छ । सरकारद्धारा गठित उच्चस्तिरीय समितिले प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को काठमाडौं, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत, प्रदेश ७ को धनगढीलाई सम्भावित राजधानी प्रस्ताव गरेसगै ती ठाउँहरुमा जग्गाको भाउ आकाशिन थालेको हो । सुनसरीमा केहीअघि ७० लाख सम्म पर्ने एउटा घडेरीको मूल्य अहिले ८० लाखदेखि १ करोडस...
अर्काका जोइपोइ बिहे गरेको भनेर कुट्दै जुत्ताको माला र मोसो लगाइ गाउँ निकाला
मोरङको रंगेली नगरपालिका–५ आँपगाछीमा अर्काकी श्रीमती विवाह गरेको आरोपमा एक जोडीलाई गाउँ निकाला गरिएको छ । एमालेका एक स्थानीय नेताको अगुवाइमा विवाहित दम्पतीलाई मोसो दली जुत्ताको माला लगाएर गाउँ निकाला गरिएको हो । स्थानीय राजकुमार ठाकुर र सोही ठाउँकी सरदार थरकी महिलालाई दोस्रो बिहे गरेर गाउँ–समाजको थिति खलल पारेको आरोपमा एमाले नेता दिनेश ठाकुरको अगुवाइमा कुटपिट गरिएको हो । दिनेश ठाकुर एमाले रं...
गाइबस्तुले पनि पाउन थाले सुत्केरी भत्ताको पैसो
सल्यान । महिलालाई गर्भवती हुँदा पोषण र आहारका लागि सुत्केरी भत्ता दिइएजस्तै कृत्रिम गर्भाधानबाट ब्याएका पशुलाई भत्ता दिन थालिएको छ। सल्यानका पाँच किसानलाई आफूले पालेका पशुलाई कृत्रिम गर्भाधान गराएको भन्दै उनीहरूको स्याहारसुसार र आहारका लागि भत्ता दिइएको हो। पशु सेवा कार्यालयले पाँचैजना किसानलाई जनही पच्चीस सयका दरले प्रोत्साहन रकम वितरण गरेको हो। प्रोत्साहन रकम पाउनेम...
खविन लुइटेल, पाँचथर । तमोर कोरिडोर मेची राजमार्गको वैकल्पिक सडकको रूपमा देखिएको छ । ताप्लेजुङ र पाँचथरका यात्रुबीच तमोर कोरिडोर नयाँ विकल्पको रूपमा लोकप्रिय बन्न थालेको हो । ‘पाँचथरको यासोकबाट धरान जान मेची राजमार्ग हुँदै जाँदा झापा पुग्न मात्रै ६ घण्टा लाग्छ, तर तमोर कोरिडोरबाट ५ घण्टामै धरान पुग्न सकिन्छ,’ यासोकका व्यवसायी गोपाल पोखरेलले बताए । उनका अनुसार धरानबाट यासोकसम्म तमोर कोरिडोर हु...
झन् झन् बढ्दै पो रहेछ त गरिबी
काठमाडौं । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरिबका लागि ठूलो रकम खर्च गरे पनि गरिबको संख्या झनै बढेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा गरिबीको संख्या सात प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । यसअघि योजना आयोगले यसै वर्ष सार्वजनिक गरेको १४ औं त्रिवर्षीय योजनामा नेपालमा २१.६ प्रतिशत गरिब भएको उल्लेख थियो । बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार गरिबको संख...